Akhriso Dhacdada Magafe Somali ah oo si Arxan daro ah u dilay 13-qof. – Kismaayo24 News Agency
Akhriso Dhacdada Magafe Somali ah oo si Arxan daro ah u dilay 13-qof.
by admin 3rd December 2017 037
Maxkamad ku taalla magaalladda Milan ee dalka Talyaaniga aya sheegtay in Eedeysanahaasi oo lagu magacaabo Cismaan Maxamuud la ogaaday inuu dalka Libya ku soo dilay ugu yaraan 13 qof, oo aysan tirada ahayn 4 qof, sida ay Maxkamadda horey u shaacisay.
Eedeysanaha oo 20-jir waxaa bishii hore lagu xukumay Xabsi Daa’in, kadib, markii lagu helay inuu la shaqeyn jirey Ma-gefayaasha Libya, isla markaana uu Kufsi, Jirdil iyo dilal u geystay Tahriibayaal Soomaali ah oo lagu haystay Libya.
Wakaalladda Wararka Talyaaniga ee ANSA oo aan warkan ka soo xiganay ayaa qortay inay Maxkamadda Milan ku heshay Cismaan Maxamuud inuu 2 nin oo ka mid ah Tahriibayaasha uu ku daldalay gudaha dalka Libya,
Sidoo kalena uu Kufsi u geystay Haween iyo gabdho aad u yaryar.
Maxkamadda Milan waxay sheegtay in Eedeysanaha oo ah qof aad u arxan darnaa uu dilay ugu yaraan 13-qof oo Soomaali, inkastoo uu horey u qirtay inuu dilay 4 qof oo keliya.
Dhageyso:Abuu Mansuur Roobow oo kormeeray xeerooyin aykujiraan.
Ma Runbaa wararka sheegaya in tiro ka badan 1000 kun Dagaal-yahano Shabaab ah isku dhiibayaan DF…
Baarlamaanada Soomaaliya iyo Jabuuti oo heshiis kala saxiixday
Ahmed sudani 28th November 2017
DEG DEG: Masuul sare oo ka tirsan maamulka dagmada wadjir oo goordhaw la dilay iyo mid kale oo la dhaawacay
Tifaftiraha K24 25th March 2017
Waalidiinta ku Nool Dalka Britain oo caruurtooda ku soo celinaya Soomaaliya.
Mohamed Abdirashid Abaajo 10th March 2019